Public Company ဆိုသော အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ထူထောင်ခွင့်ြ့ပုလိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » Public Company ဆိုသော အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ထူထောင်ခွင့်ြ့ပုလိုက်ခြင်း
Public Company ဆိုသော အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ထူထောင်ခွင့်ြ့ပုလိုက်ခြင်း
Posted by လင်းဝေ on Feb 16, 2012 in Business & Economics, Money & Finance |9comments
မနေ့က နေပြည်တော်ကြီးမှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံး က တစ်ယောက်နဲ့ ပြောဆိုရင်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီတဲ့။ အခုရက်ပိုင်း တိတိကျကျပြောရရင် ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ကမှ တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါတဲ့။ သေချာမသိသူများကတော့ အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာပြည်မှာ အရင်က တည်ထောင်ခွင့်မပြုဘူးလား လို့ စောကြောပါလိမ့်မယ်။ အင်း.. မရှိတာလည်း မဟုတ်သလို ရှိတာလည်း မဟုတ်ဘူးဗျ လို့ပဲ မရှင်းမရှင်းဖြေခွင့်ပြုပါ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အရ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခွင့်ပြုတာတော့ ဥပဒေအရ အများပိုင်(Public Company)ကော သီးသန့်ပိုင်(Private Company)ကော တည်ထောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သို့သော်….( မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီ သို့သော်တွေ အလွန်များခဲ့ များဆဲ…မျိုးကြီးလေသံနဲ့ ဆိုကြည့်ပါ…များခဲ့…များဆဲ… အချိန်မီသာပြင်ဆင်ခွင့်မရှိရင်..) ၁၉၉၇ခုနှစ် အေးရှား စတော့ဈေးကွက် ပြိုလဲမှုမှာ တိုင်းပြည်အများ ထိခိုက်တာကို ကြောက်လန့်သွားသော ရွှေဥာဏ်တော်ရှင်ကြီးက သို့ကလိုဆိုရင်ဖြင့် ရွှေပြည်ကြီးမှာ အဲသလိုမဖြစ်အောင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ မထောင်စေနဲ့ကွာဆိုပြီးလုပ်ချလိုက်တယ် လို့ ပါးစပ်ရာဇဝင် ရှိပါတယ်။ သည်လိုနဲ့ ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီး လုပ်ထားတာကြီးကို ထိုရွှေဥာဏ်တော်ရှင်ကြီး လက်ထက်မဟုတ်တော့တဲ့ အချိန်မှာလည်း ဘယ်သူ့ကမှ လျှာရှည်ပြီး ခွင့်မပြုရဲဘူးဖြစ်နေကြပါတယ်။ အခုတော့ ပတ်သက်သူ၊လုပ်ကိုင်ချင်သူ၊တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်က အထက်အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြီးပြီးနောက် ခွင့်ပြုလိုက်ပါဆိုလို့ ပြန်လည်ခွင့်ပြုပါတော့မယ်။
အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်လျှောက်ထားလိုသူများအတွက် အခြေခံအချက် ၇ချက်ရှိပါတယ်တဲ့။ မနေ့ကပြောတဲ့သူကပြောပေမယ့် ကိုကလည်း သတင်းထောက်အစစ်မဟုတ်တော့ လိုက်ချပြီး မရေးဖြစ်ပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် သူတို့ရုံးမှာ ဘုတ်ထောင်ဖို့ ဗီနိုင်းကလည်း အပ်ထားတုန်းတဲ့။ အချက် ၇ချက်ကို အကြမ်းမှတ်မိသမျှအခြေခံကျတာတွေကို ပြန်ပြောပြရရင်
– ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် ၇ဦးအနည်းဆုံးရှိရပါမယ်။ (မူလ တည်ထောင်သူ ဒါရိုက်တာများ)
– သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းကို အများပိုင်ကုမ္ပဏီသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်းဖြစ်ရမယ်
– အစုရှယ်ယာများကို လွှဲပြောင်းခွင့်ကို မကန့်သတ်ထားရဘူး
– မတည်ရင်းနှီးငွေ ရဲ့ ပထမအကြိမ်ထည့်ဝင်မှုကို မူလ တည်ထောင်သူ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် ၇ဦးက အပြည့်အဝ ထည့်ရပါမယ်။ ( Paid-up Capital – First Call )
– ဒါရိုက်တာ ၇ဦးစလုံးရဲ့ အဆိုပြုခံဝန်ချက်
စတာတွေနဲ့ ကျန် ၂ချက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သိပ်အရေးမကြီးတဲ့အချက်တွေပါ။ မှတ်ပုံတင်တို့ ဘာတို့ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။
အခုလက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မတိုင်မီနဲ့ ကြားထဲမှာ အထူးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရထားသော မှတ်ပုံတင်ပြီးသား အများပိုင်ကုမ္ပဏီ တွေက အောက်ကအတိုင်းပါ။
၁-( ပြည်သူချစ် ဦးပိုင် ) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်
၃-ရွှေနိုင်ငံအရှေ့အာရှကုမ္ပဏီ ( စီး-ကူး နဲ့ ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်တို့ရဲ့ အစိုးရတပိုင်းအများပိုင်လုပ်ငန်း )
၄-သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများဖက်စပ်လုပ်ငန်း ( FPJV ဆိုပြီး အမ်စက်(MSEC) မှာ အစုရှယ်ယာတွေရောင်းပါတယ်)
အဲဒီအပြင်မှာ နာမည်ကျော် ပထမမြန်မာရင်နှီးမြုပ်နှံမှု အုပ်စု (FMI) ကတော့ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခွင့်မရရှာတဲ့အများပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်တိုးခွင့်မရသလဲ မမေးပါနဲ့။ သိပ်ဖြေချင်နေလို့။
နောက်ပြီး ဘာကြောင့်စာရင်းမဝင်မှန်းမသိတဲ့ MICT Park နဲ့ မအောင်မြင်တာလား ဘာဖြစ်နေတာမှန်းမသိတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ထောင်မယ်လုပ်တဲ့ အများပိုင်လုပ်ငန်းတို့လည်း စာရင်းမှာမပါ ပါဘူး။
ပြောရရင် လက်ချိုးရေရင်တောင် လက်တစ်ဖက်မပြည့်ဘူး ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့။
အများပိုင် ကုမ္ပဏီတွေ ခွင့်ပြုမယ် ဆိုတာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ အများအတွက်အကျိုးရှိသလို တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်အားကောင်းမောင်းသန် လုပ်ငန်းကြီးတွေ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်တာမို့ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်။
သို့သော် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည့် ပြည်သူအများကလည်း အများပိုင်လုပ်ငန်းဆိုတာဘာလည်း သေချာသိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ အလွယ်ပြောရရင် လူအများက ရင်းနှီးထည့်ဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကိုအများပိုင်ကုမ္ပဏီလို့ခေါ်ပါသည်။ အဲဒီအများပိုင် ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပမာဏအလိုက် မဲပေးခွင့်သတ်မှတ်ထားချက်အတိုင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ထိုလုပ်ငန်းရဲ့ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ထိုလုပ်ငန်းများမှ နှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ (dividend)ကိုအစုရှယ်ယာဝင်များကို ခွဲဝေပေးပါတယ်။
သို့သော် အများပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာ Public Company ဆိုတာ Profit or Growth ဆိုတဲ့ ရွေးစရာနှစ်ခုထဲက တစ်ခုကို ရွေးရတာပါ။ အမြတ်များများလိုချင်သလား လုပ်ငန်းကြီးထွားတာ၊အစုရှယ်ယာဈေးတက်တာ ကိုလိုချင်တာလား ဆိုတဲ့ နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုရွေးပြီး လျှောက်လှမ်းရတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အမြတ်ငွေတွေ ခွဲပေးလိုက်ရင် လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ ချဲ့ထွင်ဖို့ပြန်ရင်းဖို့ ငွေမရှိဘူးလေ။ ငွေတွေပြန်ရင်းပြီး အမြတ်နည်းနည်းပဲထုတ်လိုက်ရင်တော့ လုပ်ငန်းကြီးထွားလာမယ် အစုရှယ်ယာဈေးတွေတက်လာမယ် နောက်တော့ dividend အမြတ်နှုန်း percentage က ငြိမ်နေပေမယ့် ပမာဏများလာမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အခုထူထောင်တဲ့ အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ အမြတ်နှုန်းကို ၁၁% ၁၂% ကနေ အများဆုံး ၁၅%ထက်ပိုပေးကြမယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ ဘဏ်အတိုးနှုန်းက ချေးငွေကို ၁၀%ပဲလေ။ လုပ်ငန်းသာ အောင်မြင်တယ်ဆိုရင် ဘဏ်တွေက ချေးချင်လွန်းလို့။ အဲသလို ချေးငွေ ၁၀% နဲ့ ယူလို့ရနေတာကို အမြတ်ဝေစု ၁၅% ပေးရင် တော်တော်မှားတာလို့ပဲပြောရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ထောင်ချောက်ဖြစ်မယ်။ ၁၀%နဲ့ချေးယူပြီး လုပ်ရင် အမြတ်ပိုရမှာဖြစ်သလို ရှယ်ယာတွေကို ဈေးကွက်မှာ ထုတ်မရောင်းရင် ရှယ်ယာဈေးတက်မှာလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၅%များပေးနေတဲ့ အများပိုင်လုပ်ငန်းတွေ ရှိလာရင် ချိန်ဆသာ ထည့်ကြပေတော့။
အများပိုင်လုပ်ငန်းမှာထည့်ပြီးထားရင် ဆုံးရှုံးမှု လုပ်ငန်းအရှုံးပြတာ ဒေဝါလီခံတာတွေဖြစ်ရင်တော့ ပြန်မရဘူးနော်။
အခုတော့ တကယ်လုပ်နိုင်သူတွေက အများပိုင်လုပ်ငန်းတွေထူထောင်မယ် ဆိုနေကြသလို အခွင့်အရေးသမားအချို့လည်း ပါလာနိုင်တာမို့ သာမန်ပြည်သူများ သတိထားကြစေချင်လို့ မိတ်ဆက်သဘောရေးပြတာပါ။
တကယ်တမ်း ဒီလို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဈေးကွက်ဖြစ်လာရင် အလကားနေရင်း ဈေးကစားကြတဲ့ မြေဈေး ရွှေဈေးတွေ အလန့်တကြား အကြောင်းမဲ့ မတက်တော့ပါဘူး။ ဈေးကစားချင်သူတွေဆွဲဆောင်ရာနောက်ကို ငွေယားရှိသူ သာမန်ပြည်သူများ လိုက်ဖြစ်ချင်မှ လိုက်ဖြစ်တော့မှာမို့ပါ။
နောက် အများပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ အမှုဆောင်အရာရှိ အလုပ်တွေ လူငယ်တွေ လုပ်နိုင်ကြပါစေ။ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ၂၀၁၅ မတိုင်မီ အောင်မြင်ကြပါစေ။
ဒီသတင်းလဲ ကိုဝေကြီးပြောမှ သိရတာမို့ ပါ..
ခုလို သတိပေးတဲ့အတွက်ရော..ပိုစ့်လေး တင်ပေးတဲ့အတွက်ပါ..
အမှုဆောင်အရာရှိ တော့ လုပ်ချင်ပါတယ်။
အရည်အချင်းကလည်း စီအီးဒီ ဖြစ်နေတယ်ဗျ။
Chief Executive Driver ပါဗျာ။
ကိုလင်းဝေ ရန်ကုန်မှာ မရှိလို့ တစ်ပွဲလွတ်သွားပြီဗျို့။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမယ့် စီးပွားရေး ရေစီးကြောင်းအသစ်ထဲမှာ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုယက်ကန်ယက်ကန် ကူးခတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ။
ခုလို အသိပညာလေးတွေပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။
ဒီသတင်းကို ကြားဖူးပေမယ့် အခုမှ ဇာတ်ရည်လည်တော့တယ် …
ကိုလင်းဝေ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့လုပ်ငန်းလဲ အများပိုင်လုပ်တော့မယ် …
စီဗွီ ပလိုဖိုင်လေး တုန်တုန်ရီရီကိုင်ပီး ..တားတား လာလျောက်ပါ့မယ်. ..
အမည် – ဖားသက်ပြင်း
ပလော်ဖက်ရှင်နယ်လ် – မားကတ္တင်း
ထင်ရှားသည့် အမှတ်အသား – နှူးဘာ
ထူးခြားသည့် အရည်အချင်း – ကျောက်ဆင်းတုခေါင်းညှိမ့်ခြင်း
အားနည်းချက် – စကီလေးများ
ဘ၀ မစ်ရှင်း – အချစ်နဲ့ အရက် ဆိုတာ တန်-ဆေး၊လွန်-ကောင်း၊ များ-ဘဲဒီးဂွတ်။
လက်ကိုင်ပြုဆောင်ပုဒ် – သည်တခါ လွဲလည်း အနည်းဆုံးတော့ ကေ့စ်စတာဒီ ဖြစ်တာပေါ့အေ ။
တချို့လူတွေများအရည်အချင်းက စီအီးဒီ ဆိုလား..
မဝေရေ မနေ့ညကပဲ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်ဖြစ်တယ် company men ဆိုတဲ့ကား တွမ်မီလီဂျုံးစ်၊ဘန်အဲဖလက်၊ကေဗင်ကော့စနာ ဘာညာ အစုံနဲ့ကားကြီး။ သဘောင်္တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီင်္ကြီးတစ်ခုက အဲဒီငွေကြေးပြဿနာနဲ့ စတော့ပြဿနာ။ နောက်အလုပ်ပြုတ်ကြ နောက်ဆုံးအလုပ်ပြန်ထောင်ပြီး ပျော်စရာဇာတ်သိမ်း။
ဒီနေ့ မဝေက လာပြောတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်။ အလားအလာတော့ အလွန်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးပါ။
အဲဒီမှာအရင်က အကြွေးတွေနဲ့ လူကပ်ပါးတွေ မရှိမှ ပိုကောင်းမယ်။
ဂီ ကို မားက္ကတင်း ဗီပီ ခန့် မဝေ ကတော့ စီအိုအိုပေါ့ ကိုသစ်ကို စတွာတီးဂျစ်ကွန်ဆော်လတန့် ကိုဘလက်က စီအက်ဖ်အို ပေါက်ဖော်ကို အိုင်တီဂျီအမ် မမကတော့ ဆေးလ်ဗီပီ မစ္စတာနိုဇို က ကော်ပိုရိတ်အဖဲယား ကြီးမိုက် ကြောင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီ အမတ်မင်း သူကြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို စီအီးအို ရွေး။ အဲဒီရှယ်ယာတွေ ကျနော်တော့ မဝယ်ဘူးနော်။ ဟားးးဟားးးးဟားးး